musha AFRAN FOOTBALL STORI George Weah Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeMutambo mwari uye Mutungamiri uyo anozivikanwa zvikuru nezita reNickname; 'King George'. Our George Weah Childhood Story uye Biography Facts inounza iwe zvizere nhoroondo yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazita, hupenyu hwemhuri, hukama hwehukama uye zvimwe OFF-Enda zvishoma zvichakazivikanwa pamusoro pake.
Hungu, munhu wese anoziva nezveBolon d'or uye Liberia Presidency role asi vashomanana vanofunga nezveGeorge Weah's biography iyo inonakidza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
George Weah Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
George Tawlon Manneh Oppong Ousman Weah akaberekwa musi we 1st October 1966 (age 51), Monrovia, Liberia.
George akakurira zvakare naambuya vake shure kwekufa kwababa vake. Akakurira kuWest Point, shantytown inoshandiswa nemagandanga emaguta. Ndiye nhengo ye Kru dzinza revanhu, chimvuramabwe chinobva kuchamhembe-kumabvazuva kweLiberia Grand Kru County, imwe yenzvimbo dzakashata pane dzimwe nyika.
George Weah Nhoroondo yehuduku
Akaenda kuchikoro chesekondari kuMuslim Congress uye kuchikoro chesekondari paHerals Hairston High School uye akabuda akabuda mugore rake rokupedzisira rezvidzidzo. Akatanga kutamba mutambo wechikwata chevechidiki vechidiki vechidiki pazera re15 uye gare gare akatamira kune dzimwe machechi emakwikwi emunharaunda, achifunga nezvemabasa ekutarisira Mighty Barrolle uye Invincible Eleven apo akawana 24 vavariro mumasangano 23.
Mushure mokumuka kuburikidza nemitambo yavo, maCameroon scout akamuona ndokubva amusayina kumukirabhu wepamusoro, Yaound side FC. VaCameroon scout Claude Le Roy, vakatumira nyaya dzehutano hweWeah kumutariri we AS Monaco Arsene Wenger. Wenger akaendesa kuAfrica kuti azviratidze, ndokubva asayina Weah kukirasi yake.
Asati aita basa rake rebhora rakamurega kuti aende kune dzimwe nyika, Weah akashanda kuLiberia Telecommunications Corporation se switchboard technician. Akava wokutanga, uye anenge ari oga, Liberian kuita chiratidzo muEurope. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
George Weah Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Clar Weah ndiye mudzimai waGeorge Weah. Iye akazvimiririra United States of America vagari nevabereki vanobva kuJamaica.
George uye Clar
Akakurira muFlorida, US, kwaakakwanisa kushanyira mabhizinesi akawanda kusanganisira yekudyara kweCaribbean restaurant nekutengesa.
Maererano nemishumo, George uye Clar vakasangana muUnited States kuChase Bank bazi umo Clar yakashanda semushandi webazi. Uyu aimbova nemuvengi we AC Milan akanga aenda kubhangi kuti azarure account apo maziso ake akabata Jamaican yakaisvonaka. Rudo rwenyaya yavo rwakaiswa mumoyo wose uye rwakaramba ruchikura rune simba pasinei nehuwandu hwenhema hwekusatenda kutevera Weah.
Clar, uyo akasiyana nevakadzi vakawanda vekuCaribbean, anongopfeka zvese, haasi kungoonekwa semunhu ane ruzivo rwakanakisisa asi anonyanya kufarirawo, kushevedzera kwake kwakajeka kunyange munguva dzakaoma kunokwanisa kuputsa zvipingamupinyi. Vachipiri vese vanorondedzera iye sevakangwara uye vane ruzivo rwakasiyana rwera. Jamaican inoshandisa simba rakapoteredza murume wake. Ivo vose vane vana vatatu: George Weah Jr, Tita naTimoti.
Timothy Weah, mwanakomana we1995 Ballon d'Or mupepeti George Weah, asayina chibvumirano chake chekutanga chepamberi neParis Saint-Germain.
Mwanakomana weGeorge Weah- Timothy
Iyo 17-makore-mberi mberi inotevera mumakwara ababa vake, avo vakapedza makore matatu muLigue 1 club, vasati vadzokera ku AC Milan. Timothy akabatana nePGG's academy mu2014 uye akafananidzira zvose U-15s uye U-19s.
George Weah Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Baba vake, William T. Weah, Sr. yakanga iri magetsi apo mai vake, Anna Quayeweah vaiva mutengesi. Ane vanakomana vatatu, William, Moses naWolo.
George Weah aiva mumwe wevatatu gumi nematatu zvikuru akakurira namai vake vechiKristu vakazvipira, Emma Klonjlaleh Brown mushure mekunge vabereki vake vakaparadzana.
George Weah Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Kubudirira kweEurope
Hongu, aive tarenda yakajeka isina kudzidziswa zvishoma. Weah akaonekwa asina kunyanya kutarisa basa rake reEurope. Zvisinei, ane simba 6'2 "muchengeti akakurumidza kugamuchira kusvika kumakwikwi uye akazoita kuti ave chinangwa chinouraya chinonzi scorer.
Kuenda kuParis Saint-Germain kwakaita kuti tifarirwe naHeah, uyo akabatsira kambani yake kukunda FIFA Cup mu1993 uye mutauro weLigue 1 mu1994. Zvichida zvisingagoni kudzivirirwa panguva ye 1994-95 segore, akatakura PSG kuFrance neLigue Cup kukunda uye akapedza seChampions League inotungamirira scorer. Mushure megore, akatumidzwa kuti Africa, Europe uye FIFA World Player yegore-chisati chaitika.
George Weah Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -kurwisana
Weah yakarambidzwa kubva mumitambo mitanhatu yekuEurope kuburikidza nekuputsa mhino yemudziviri wechiPutukezi Jorge Costa pane 20 November 1996 mumugwagwa wevatambi mushure mekunge Milan atora kuPorto muChampions League. Weah akati akaputika mukudengenyeka mushure mokumanikidzwa nekunyomba kwechisarudzo kubva Costa mukati mavo maviri emakwikwi eChampions League mutsvondo.
Ko Costa akaramba zvakasimba kupomerwa kwechisarura uye haana kupomerwa neEFA sezvo pasina vopupuri vanogona kuongorora zvinonzi Weah, kwete kunyange Milan vaanodzidza navo. Weah akazotevera kuedza kukumbira ruregerero kuCosta asi izvi zvakatsoropodzwa nevaPutukezi, avo vaifunga kuti mhosva dzekusarura kwechisimba dzakasvibiswa kwaari kuti azvidze uye vakatora vaRiberia kuti vatonge.
Chiitiko chacho chakaita kuti Kosta aone kuvhiyiwa kwemaziso uye akazobviswa kwemavhiki matatu. Pasinei nechiitiko chacho, Weah achiri kugamuchira mubayiro weFIFA Fair Play mu1996.
George Weah Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -chitendero
Weah akatendeuka kubva kuchiKristu chePurotesitendi kuenda kuIslam, asati atendeuka shure. Anotarisira rugare rwevaMuslim nevaKristu, uye vanoti ivo "Vanhu vanomwe".
Weah zvakare aita zvePurotesitendi.
MunaOctober 2017, akaonekwa muchechi yakakurumbira yeNigeria ye Pastor TB Joshua pamwe neRebhenan Senator Prince Yormie Johnson.
TB Joshua ainzi inonyanya kukoshesa chisarudzo chaJohnson chokutsigira weah kubvumirana muzvigaro zveChnumX Liberian.
George Weah Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Mwanakomana Wechokwadi weLiberia
Weah akabatanidzwa zvakanyanya munyaya dzeimba yake yezvigaro-yehondo yakarohwa nehondo apo achiri pakati pekuita kwake basa.
Achiziva kukosha kwebhola sechisimba chekusimudzira muLiberia, Weah akapedza mari inofungidzirwa $ 2 mamiriyoni emari yake pakufambisa, zvigadzirwa nemari yemari yemutambo wenyika, Lone Stars.
George Weah Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -unhu
George Weah ane chirevo chinotevera kumunhu hwake.
Strengths: George Weah anobatanidzwa, vanobvumirana, vane nyasha, vasina hanya, vanogara
Kushaya simba: George Weah anogona kuva Indecisive uye ane hanya nemunhu. Kunyanya zvakadaro anodzivisa kupikisana uye anogona kutakura gakava.
Zvakaita George Weah anoda: Kushamwaridzana, unyoro, kugovana nevamwe uye pakupedzisira, hupenyu hwekunze.
Zvakaita George Weah Zvisingadi: Chisimba, kusaruramisira, mheremhere uye kufanana.
Panyaya yakawanda, George ane rugare, akanaka, uye anovenga kuva oga. Ushamwari hwakakosha zvikuru kwaari.
George Weah Utano Nhau Plus Untold Biography Facts -Presidency
George Weah akamhanyira kutungamiri weLiberia senhengo yeCongress for Democratic Change mu2005, asi akarasikirwa neEllen Johnson Sirleaf weUnited Party. Muna 2011, aive zvakare paitikiti yeCDC, nguva ino sevhini vamiririri, asi Sirleaf akaramba ari muhofisi.
Kushayikwa kwe weah kwekudzidzisa kwakava nyaya yepurogiramu. Akange achitsoropodza avo vanoti haafaniri kutonga. Akatanga kutaura kuti ane BA degree mu Sports Management kubva kuParkwood University kuLondon, asi, iyi isati yakagadziridzwa diploma mill iyo inopa zvipo zvisingatenderwi kudzidza. Weah ndokutsvaga dhigirii mubhizinesi rezvemabhizimisi paDeVry University kuMiami.
Pasinei nedambudziko rezvematongerwo enyika, Weah achiri munhu ane simba zvikuru uye anozivikanwa munyika yake. MunaApril 2016, Weah akazivisa chinangwa chake chekumhanyira Mutungamiri weLiberia kwechipiri. Bhora Mwari akazove Mutungamiri weRiberia muna December 2017 mushure mekukundwa Vachimiriri vemutungamiri Joseph Boakai.
CHOKWADI KUTI: Nyasha yekuverenga yedu George Weah Childhood Indaba pamwe untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!.